Bayramay Marmaray Akwụ ụgwọ, Metro Free! N'ihi gịnị? - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulBayramay Marmaray Pagwọ Ọrụ, Metro Free! N'ihi gịnị?
marmaray na-akwụ ụgwọ ezumike n'efu na ihe kpatara ya
Ahịrị Hacıosman-Yenikapı, otu n'ime ụzọ ụgbọ okporo ígwè abụọ dị mkpa nke Istanbul, anaghị akwụ ụgwọ n'oge ememme ahụ ma na-akwụ ego maka Marmaray. Ebumnuche bụ na arụmọrụ Marmaray bụ n'ozi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye na-akwụghị ụgwọ rue Yenikapı site na iwere metro Halkalına-akwụ ụgwọ maka mbufe.
Ka ụgbọ njem ọha nke Obodo na-akwụghị ụgwọ n'ihi Eid al-Adha, 10 mepere onye isi AKP maka Istanbul Metropolitan Mayor Binali Yildirim na Onye isi ala Erdogan. Halkalı-Grize emeela ka mmeghachi omume nke ụmụ amaala kwụọ ụgwọ.
Sözcü Fatma VurgunDị ka akụkọ ahụ si kwuo, IWU Metropolitan nke IETT na-arụ, IETT, Metrobus, BUS, Publicgbọ njem ndị nkịtị, City Lines Ferry, ụgbọ njem ọha nke onwe, ụgbọ okporo ígwè, funicular na ụzọ ụgbọ oloko. 10 Na Mach, a kwụrụ Marmaray, nke bụ akụkụ nke TCDD, na-akpata mmeghachi omume nke ụmụ amaala.
KPATARA METRO PAID, METRO ỌR FREE ANYA
HalkalıOnye njem nke chọrọ ịga Levent site na Yenikapı, nwere ike ịkwụ ụgwọ na Marmaray na TCDD TCDD na 3.25 TL wee gafere na Istanbul site na Obodo ukwu nke Istanbul. Citizensmụ amaala na-eche na Marmaray nweere onwe ha enweghị ike zoo ihe ijuanya nke ịhụ na e bepụrụ ego ahụ n'ụkwụ ahụ.
Citizensmụ amaala kwuputara mmeghachi omume ha na Marmaray na-akwụ ụgwọ site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Oge mmemme Marmaray Fee
Ndi Bayramda Bus, Metro, Marmaray n'efu na Istanbul? Eid al-Adha Ọ 2019 Ọdụ Ọha Ọha na - enwere n'efu? 11 / 08 / 2019 Mkpebi nke Metrolọ Ọrụ Nkwuputa Obodo Obodo nke Istanbul mere mkpebi nke Onye Isi oche Ekrem İmamoğlu ga-enye ndị njem njem ọhaneze na Istanbul na Victbọchị Mmeri na thebọchị Mmeri na August 30. IETT ga-ahazi ụgbọ elu maka ụmụ amaala iji ruo ebe a na-achụ igwe mmadụ IMM. Obodo Obodo Istanbul (IMM) mere ihe dị mkpa maka ụmụ amaala iji rie oriri udo na nke udo. Iji zere erughị ala ọ bụla na njem na mmezu nke ọrụ ịchụ aja, ìgwè ndị IMM metụtara ya ga-anọ na ọrụ n'oge ememme 7 / 24. Metrolọ Ọrụ Nkwado Obodo nke Istanbul, nke a kpọkọtara n'okpuru ọkwa nke onye isi ala MMI Ekrem İmamoğlu na July, haziri taşıma
Ejiri Ala Osmangazi kwụọ ụgwọ maka ememe? 05 / 06 / 2019 A ga-akwụ ụgwọ site na Osmangazi Bridge na ezumike. Mee - Arụ Ọrụ - Nyefee (BOT) mere Yavuz Sultan Selim Bridge (3. Bridge), na Eurasia Ọwara, Izmit ejikọ Osmangazi na Bay Bridge na Transition n'okporo ụzọ ga-anọgide na-akwụ ụgwọ ahụ n'otu ụzọ ahụ mgbe Eid al-Fitr. Ego ole ka Osmangazi Bridge gafere? Cars 103,05 kwa ìhè azụmahịa ugbo ala 164,85 £ Motorcycles 72,15 kwa xnumx.sınıf ugbo ala 3 kwa xnumx.sınıf ugbo ala 195,75 kwa xnumx.sınıf ugbo ala 4 kwa Yavuz Sultan Selim Bridge tolls ole? (Xnumx.köpr nke) Cars 259,65 kwa ìhè azụmahịa ugbua 5 TL Mgbawa 327,65 TL lar
Arụ ọrụ na İstanbul Metro Etiler ụgwọ, Başakşehir Free 19 / 03 / 2018 IBB President Mevlüt Uysal's "Ihe kacha mkpa na Metro ga-abụ ebe anyị ga-esi nweta ọtụtụ votu," ka o kwuru. The n'ihi: CHP, na akp na-akwụ ụgwọ ihe na ụgwọ tụnyere aga na ụbọchị ... The akp mere Arnavutkoy congressional district, Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Mevlüt Uysal ya "mbụ anyị mkpa ugbu a na ụzọ ụgbọ oloko. Na ụzọ ụgbọ oloko, ihe mbụ anyị ga-ebute bụ ebe anyị ga-esi nweta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ETİLER ugwo, FREE BAŞAKŞEHİR President Mevlut Uysal ndị a okwu, kama ọ na-onyeisi obodo Kadir Topbas n'ihu ndị ibe ya rutere Esenyurt district "Kirazlı- Başakşehir ...
A na-akwụ ụgwọ Marmaray 13 / 11 / 2013 A na-akwụ ụgwọ Marmaray Ebe a bụ Ụgwọ maka ịbanye na Marmaray: Marmaray ga-arụ ọrụ ụgwọ ụgwọ taa, yabụ ego ole Marmaray ga-eri, ụmụ akwụkwọ na ụgwọ zuru ezu ga-abụ akụkọ anyị ... Marmaray, nke na-akwụ ụgwọ n'efu maka ụbọchị 15, na-akwụ ụgwọ taa. Site na arịrịọ onye isi nke Marmaray rịọrọ, 15 agbawo Marmaray n'enweghị ụgwọ maka ụbọchị ahụ. 29 15 ji ya n'efu n'efu na arịrịọ nke President nke Marmaray bụ nke meghere na Ụbọchị Ọchịchị Oktoba. Ụbọchị 15 na-emecha rụọ ọrụ taa. Na njedebe nke ụbọchị ọ bụla nke 15 Marmaray ga-akwụ ụgwọ site echi. Ihe karịrị nde mmadụ 4.5 jiri ohere nnwere onwe na-eme ihe maka oge 15. Marmaray Istanbul Kaadị ebe echi ...
Bayramda Ankara Bus na Metro ga-abụ n'efu 06 / 09 / 2016 Ndi na Deba aha Free Day na Ankara, Bus na Metro: Ankara Metropolitan Municipality, na-eji Eid na udo na nchebe, karịsịa na isi obodo ego na AS were dị mkpa jikoro na niile nkeji. Metropolitan Municipality, na-eji Eid na udo na nchebe, karịsịa na isi obodo ego na AS were dị mkpa jikoro na niile nkeji. Ụgbọ ala ndị na-adọrọ onwe ha ga-enwere onwe ha n'oge ezumike. Başkentliler, chọrọ na mkpesa n'oge ememe, 7 / 24 153 nanị mgbasaozi na-emeghe akara, uwe ojii na ọkụ brigeedi, ga-n'ọrụ n'oge ezumike. Obodo ukwu nke obodo na-eme njem na-eme njem na-eme njem n'ememme a, Büyük
Adanada Bayramda Municipal Buses na Metro Free 08 / 09 / 2016 Adnan Bayramda Municipality Buses na Metro Free: Adana Metropolitan Municipality weere ihe niile dị mkpa iji hụ na udo na nchekwa nke àjà ememe. N'oge ememe 4, ndị Adanans ga-erite uru site na bọs na metro nkịtị. N'ụbọchị mbụ nke Arife na Ememme, bọs ndị obodo ga-eme njem na-agaghị agafe n'ebe a na-eli ozu. Ụmụ amaala, arịrịọ na mkpesa na Alo 153, ndị uweojii na ndị ọrụ ọkụ ọkụ, 9 ga-arụ ọrụ n'oge ụbọchị ezumike ahụ. Obodo ukwu nke Metropolitan Municipality ga-anọgide na-enye ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-eme njem n'efu na bọs na ụgbọ ala n'oge 4 ụbọchị Eid al-Adha. Ememe okpukpe ọ bụla na - abịa
Adaray amalite njem ụgbọ elu ya 15 / 06 / 2013 Adaray na-amalite njem ụgbọ elu ya: Sakarya Metropolitan Municipality City Rail System (ADARAY), 17 ga-amalite ụgbọelu ụgbọ elu malite na June ruo Monday. Kaadị Smart Card (Card 54) ga-adị irè na ADARAY. Ụlọ okporo ígwè nke Urban (ADARAY), nke obodo Sakarya Metropolitan obodo n'etiti Adapazarı na Arifiye mere, na-amalite njem ụgbọelu ya na June Monday. 17 obodo Smart Card Ngwa (Kaadị 27) ga-adị na ADARAY, nke na-ahazi ụgbọ elu na-akwụ ụgwọ na May. ADARAY ụgwọ zuru ezu ka kpebiri dị ka 54 TL, nke bụ njem dị mkpirikpi maka bọs nke Obodo Metropolitan. Na ADARAY, nwa akwụkwọ ahụ nwere nkwarụ ruo 1.25 percent yüzde
65 tram dị na Samsun ka a na-akwụ ụgwọ maka ndị njem nke afọ 15 / 01 / 2015 Tram 65 Senior Citizen ebubo Ịga njem Samsun Samsun Metropolitan Municipality Assembly 2015 afọ na January xnumx'inc nke banye 1 Nchikota 2 burukwa na 12 afọ Samsun ụmụ amaala bịanyere aka a mkpebi na-ewe iwe tụfuo. Samsun Metropolitan Municipality Assembly na January 65 afọ xnumx'inc Nchikota 2015 1 burukwa item nke oge, Metropolitan Municipal Assembly n'okpuru onyeisi oche nke Deputy onyeisi oche Turan Cakir, e zoro aka na kansul site ọrụ. Samsun Metropolitan Municipality Assembly Hall na ọrụ nzukọ ẹkenịmde ke Conference Hall 2 okwu a tụlere. Na agbado, 12 January 12 ụbọchị na N
A na-akwụ ụgwọ ụgbọ ala ugbu a na Yenimahalle-Şentepe 09 / 01 / 2017 Yenimahalle-Şentepe Line Teleferik Ugbu A kwụrụ ụgwọ: Ndị isi obodo obodo Ankara, n'efu na-akwụ ụgwọ kemgbe afọ 2014 Yenimahalle-Sentepe Cable Car, 1 TL maka ụgwọ a ga-ebu ndị njem. Ndị ọchịchị kwuru na ihe kachasị mkpa iji mee ka ụgbọ elu nke ụgbọ ala bụ oké ọchịchọ nke ndị bi n'ógbè ahụ na-eji ụgbọ elu nke ụfọdụ ndị na-abụghị nke nzube ya, ma kwuo na ndị njem ga-enwe ike iji ụgbọ ala dị n'etiti Şentepe na Yenimahalle site na ịkwụ ụgwọ 1 TL. Ọ bụrụ na ndị njem ahụ na-aga njem ha site n'itinyefe na Yenimahalle Metro, a ga-ebo ndị njem ahụ ebubo X
Kwa afọ a na-akwụ ụgwọ iwu gbanwere! 19 / 08 / 2017 Site na mkpebi ahụ a na-ebipụta na Official Gazette taa, a gbanwere iwu nkwụsị ụgwọ a na-akwụ kwa afọ. 18 August Na akwụkwọ ikike nke August 2017 na 30158 a na-edekọ aha ya, e bipụtara mmegharị a na iwu ezumike kwa afọ, nke metụtara ndị ọrụ. N'okwu ahụ e bipụtara, a gbanwere iwu maka ụgwọ ezumike kwa afọ. Site na mkpebi nke a na-ebipụta na Gazette Official taa, usoro nkwụsị ụgwọ a na-akwụ kwa afọ na 6. A na-ekwu na ụbụrụ ahịrị nwere ike ịkewa atọ n'ime ọtụtụ ntinye na paragraf nke atọ nke edemede akụkọ nwere ike iji na ngalaba. ". Dika iwu na Ndezigharị na Ntuzi nke Iwu a na-akwụ na Gọọmenti Gọọmenti, a ga-enwe ike ịnyefe ikikere ụgwọ ọnwa ọ bụla n'ime ihe dị ka atọ. AKWỤKWỌ ANYỊ CHARGE ET
Ụgbọ okporo ígwè ụgbọ mmiri na-ahụ maka ụgbọ mmiri
Publicgbọ njem ọha Istanbul na-akwụghị ụgwọ
Ulo oru uzo obodo
Akwụ ụgwọ Marmaray na Bayram
Arụ ọrụ na İstanbul Metro Etiler ụgwọ, Başakşehir Free
A na-akwụ ụgwọ Marmaray
Bayramda Ankara Bus na Metro ga-abụ n'efu
Adanada Bayramda Municipal Buses na Metro Free
65 tram dị na Samsun ka a na-akwụ ụgwọ maka ndị njem nke afọ
A na-akwụ ụgwọ ụgbọ ala ugbu a na Yenimahalle-Şentepe